လှေကိုစျေးကွက်အပေါ်သွားသည်ရှေ့တော်၌သင်တို့အကြောင်းသင်ယူနှင့်မည်သည့်အလားအလာရှိသောပြဿနာများကိုဖြေရှင်းနိုင်နိုင်အောင်လှေကိုစစ်တမ်းကောက်ယူဖို့ကောင်းတစ်ဦးရဲ့စိတ်ကူး. အောက်ဆုံးသို့မဟုတ် topsides တစ်ဦးဆေးသုတ်အလုပ်လိုလျှင်, ထိုသို့ပြု. သင်ထည်ပန်းချီနေတယ်ဆိုရင်, သာအဖြူသို့မဟုတ်မှောင်မိုက်ပြာရောင်ဆေးသုတ်ကိုအသုံးပြုဖို့. သို့သော်, တဦးတည်းပွဲစားအီလက်ထရောနစ်အဆင့်မြှင့်တင်ပေါ်ပိုက်ဆံဖြုန်းမဟုတ်အကြံပြုထားသည်. သင်သာကျောကြောင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၏သေးငယ်တဲ့အစိတ်အပိုင်းပဲရလိမ့်မယ်.
ဒါကြောင့်လက်ျာဘက် Price. ဒါကြောင့်လက်ျာဘက် Price. ဒါကြောင့်လက်ျာဘက် Price.
လိုင်းပေါ်တွင် Go နှင့်အင်တာနက်ဆိုက်များရှိသမျှတို့ကိုစစ်ဆေး. Yachtworld, လှေကိုကုန်သည်ကြီးများ, Boats.com စသည်တို့ကို. စသည်တို့ကို. သင်တို့အဘို့အပေါငျးနှိုင်းယှဉ်စက်လှေတစ်ဦးမိတ္တူ Print. စုစုပေါင်းအရေအတွက်ကမှတ်ချက်. မှတ်ချက်တစ်စုံတစ်ရာသော့ချက် features တွေအခြားသူများစက်လှေရှိသည်သို့မဟုတ်ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူး. အခြားအစက်လှေအင်ဂျင်စက်နာရီကိုလည်းကြည့်ရှု, ဒါကြောင့်တစ်ဦးအက်ရှင်များပါဘူး, အောက်ခြေကဆေးသုတ်, စတာတွေ, စသည်တို့ကို. ဤအချက်များအားလုံးအလွန်အရေးကြီးပါသည်. သငျသညျကိုပန်းသီးမှပန်းသီးကိုနှိုင်းယှဉ်ဖို့လိုအပ်. (ဥပမာ - အောက်ခြေကပန်းချီကား trailer စက်လှေလျော့နည်းရောင်းချခဲ့ပါတယ်။) အဆိုပါစက်လှေစာရင်းသွင်းထားရာနေရာကတော့မှတ်ချက်. (ဥပမာ - ဖလော်ရီဒါစက်လှေလျော့နည်းရောင်းချ - အပူ, နေရောင်ကို, လေတိုက်, အသုံးပြုမှုပတ်လည်ဆားနှင့်တစ်နှစ်လျှင်။)
သင်တို့အဘို့နှိုင်းယှဉ်ဖြစ်ကြောင်းစက်လှေရှိသည်သောအနည်းငယ်ပွဲစားများ Call. သင်မည်သူနှင့်သင်ရှိသည်သူတို့ကိုဘာကိုပြောပြပါ. အများစုဟာပွဲစားများကအရမ်းသမဝါယမဖြစ်သင့်. သူတို့စာရင်းသွင်းထားသောလှေတစ်စီးဖြင့်ရောင်းချသေးပါဘူးအဘယ်ကြောင့်သူတို့ကိုမေးကြည့်ပါ. သူတို့ကသူတို့လှေကိုရောင်းဖို့ယူမယ်လို့ထင်သူတို့ကိုဘာမေးပါ. သူတို့သည်သင်၏လှေကိုထိုက်သည်ထင်သောအရာကိုသူတို့ကိုမေးကြည့်ပါ. ထိုသူတို့သည်မိမိတို့အဘို့သင်တို့ပေးမညျဘာရောင်းဝယ်ဖောက်သွားခဲ့ကြသည်လျှင်သူတို့ကိုမေးကြည့်ပါ.
စျေးနှုန်းလမ်းညွှန်များ BUC နှင့် NADA စစ်ဆေး, ဒါပေမဲ့သူတို့ပြောတဲ့စကားကို၌များစွာသောယုံကြည်ခြင်းအားသွင်းထားကြဘူး. ဤသူအများစုဟာ, ကျွန်တော့်ထင်မြင်ချက်အရ, လုံးဝတိရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ဘဏ်တွေအပေါ်ချေးငွေတန်ဖိုးဟာသင့်ရဲ့စက်လှေအခြေခံဘာတွေလုပ်နေလဲ. တိပေမယ့်ဒါကြောင့်သူတို့နေဆဲစဉ်းစားရန်တစ်စုံတစ်ခုရှိတယ်.
အခုတော့ထိုင်ပြီး. သငျသညျစုဆောင်းကောက်ယူမယ့် data အားလုံးကိုမှာကြည့်ပါ. ဒါကြောင့်အမှန်တကယ်အနည်းငယ်ပိုပြီးလအတွင်းအဘို့သင့်လှေပေါ်ကျင်းပရန်ကုန်ကျသောအရာကို calculate ကို. ကိုယ့်ကိုယ်ကိုရိုးသားဖြစ်! (မှတ်ချက်: သင်သည်အဘယ်သို့သင့်ရဲ့လှေပေါ်တွင်ကြွေး၎င်း၏လက်လီ value ကိုအတူလုပ်ဖို့ဘာမှမရှိပါတယ်။) သင်၏နံပါတ်မှာ "လှုပ်လှုပ်ရွရွအခန်း" ချပြီးစိုးရိမ်ပူပန်မနေပါနဲ့. ဘယ်သူမှဖုန်းခေါ်ဆိုမှုလျှင်သင် "စေ့စပ်ညှိနှိုင်းဖို့အခန်း" စိတ်ပူစရာရှိသည်မဟုတ်လိမ့်မည်. အခုဆိုရင်သင့်ရဲ့လှေကိုရောင်းဖို့နောက်လာမည့်တစျခုဖွစျဖို့စျေး. ငါကနာကျင်သိပေမယ့်ငါ "wow ငါ့ကိုအစဉ်အဆက်ပြောနေပါတယ်ဆိုရောင်းချသူမအောက်မေ့ကြပါဘူး, ငါစျေးပေါငါ့လှေကိုရောင်းချခဲ့!"
ကိုယ်တော်၏လှေရောင်းချခြင်းသည်အ top ဆယ်ပါးအကြောင်းသိကောင်းစရာများ
1. Market မှာပြုလုပ်!: အကြီးအကျယ် Advertise. ဒေသခံစက်လှေများစာနယ်ဇင်းများတွင်ကြော်ငြာ Place, ကြီးမားတဲ့နေ့စဉ်သတင်းစာနှင့်, ဒါကြောင့်ကြီးမားတဲ့လှေကိုသို့မဟုတ်ကန့်သတ်ရရှိမှုတဦးရဲ့လျှင်ဝယ်လက်ဖွယ်ရှိကြည့်ဖို့ပြည်နယ်၏ထွက်သွားလာကြလိမ့်မည်ကြောင်း, ထို pricier ဒေသတွင်းနှင့်အမျိုးသားပြန်လည်ကွင်းအတွက်ကြော်ငြာတွေကိုနေရာချ. ရုပ်ပုံကြော်ငြာတွေပိုပြီးအသွားအလာကိုဆွဲ. ဖြတ်သွားသဖြင့်ရာပေါင်းများစွာကိုသင့်သည့်ကားလမ်းထက်ကြောင့်-ပိုပြီးမြင်နိုင်ပါသည်ဘယ်မှာအချို့သောလမ်းမကြီး-ဘက်တွေအများကြီးမှာအာကာသကိုငှား.
2. ပစ်ခတ်-up က!: တစ်အလားအလာကိုလှေကိုကြည့်ဖို့မရောက်မှီအင်ဂျင်စတင်တစ်နာရီ up ပြုလုပ်နွေး. ဝယ်လက်ကိုပယ်ခြင်းဟာအကောင်းဆုံး-လှည့်အင်ဂျင်အတွက်တစ်ဦးသေလွန်သောသူတို့သည်ဘက်ထရီကိုသို့မဟုတ် balky ပင် Start-.
3. သစ္စာ၏အပေါင်: ရူပအရေးကြီးလှသည်. လေပေါ်မှာပ-On ပရိဘောဂဖယောင်းလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်နှင့်သုတ်-ချွတ်မြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့လွယ်လွယ်ကူကူ. အဆိုပါ gleam တစ်နေ့ထက်ပိုပြီးကြာရှည်မပါဘူး, ဒါပေမယ့်ခေါ်သူတစ်နာရီကျော်ဖြစ်လိမ့်မယ်ပြောပါတယ်သောအလားအလာကိုအဘို့ပြီးပြည့်စုံသောင့်.
4. အချည်းနှီးသောကတိတော်: အချည်းနှီးသော stowage ဒေသများတွင်ပြသလူအပေါင်းတို့သည်သင်၏အဂီယာလျှံ၏အချက်မှသူတို့ကိုအတွက်ညပ်ရှိသည်ဖို့ပြီးတော့ဘယ်လောက်ကျယ်ဝန်းသဘောထားမှတ်ချက်မှပိုကောင်းင်. သင့်ရဲ့ကမကောင်းဘူး Remove.
5. Touch ကိုအမှတ်: တစ်ဦးကပရော်ဖက်ရှင်နယ်အသေးစိတ်အလုပ် pristine အခြေအနေလှေများအတွက်သဘာဝကျပါတယ်. သင့်ရဲ့လှေကိုနှုန်းထားများ "ပျမ်းမျှအား" သို့မဟုတ် "ကောင်းသော" အကယ်. ပိုပြီးထင်ရှားတဲ့အညစ်အကြေးအပေါ်အာရုံစူးစိုက်တစ်ခုတည်းကိုသာ. Fittings ကနေသွေးထွက် compound-ထွက်သံချေးအစွန်းအထင်း, Re-တိပ်ဖျက်စီးရမဲ့ Boot တက်အစင်း, အင်ဂျင်က de-လူး, ကို bilge clean, စသည်တို့ကို. အဆိုပါလေယာဉ်သည်ဆိုပါကအောက်, ခိုးကြောင်ခိုးဝှက်လေကြောင်းရန် freshners နေရာချ.
6. Fogged-ထွက်: ရှင်းရှင်းလင်းလင်းကုလားကာအသက်အရွယ်အားဖြင့်ကုတ်သို့မဟုတ်ပျက်ခြင်းမရှိနေတယ်ဆိုရင်, ကနဦးကြည့်ရှုဘို့ထိုသူတို့ကိုဖယ်ရှားရန်.
7. အောက်ခြေကယောဘကို: လှေကိုခြယ်သအောက်ခြေကဖြစ်တယ်ဆိုရင်, လတ်ဆတ်တဲ့အင်္ကျီကို apply. ဒါဟာလှေကိုပြတ်သားကြည့်ရှုစေသည်. ဒါ့အပြင်ဆေးသုတ် outboard နှင့်ဆေးသုတ်ဟောင်းနွမ်း-ချွတ်ရှိသည်သောပဲ့ drive ကို skegs ကိုလေပေါ်မှာ.
8. ပင်လယ်နက်ရုံးတင်စစ်ဆေးမှု: ကိုကင်းဗတ်ဖယ်ရှားပစ်မှုနှင့်အတူ, အားလုံးဒါပေမဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံမှုကမ်းခြေ stowed ဂီယာနဲ့အလင်းလောင်စာအတွက်နှင့်ရေ, သင့်ရဲ့လှေကိုအလိုတော်လေယာဉ်ကိုပိုမိုလွယ်ကူ, ပိုပြီး nimbly ကိုကိုင်တွယ်, တစ်ဦးပိုမိုမြန်ဆန်ထိပ်တန်းအဆုံးမြန်နှုန်းမှီ. တတ်နိုင်သမျှအနည်းငယ်မှစီးနင်း-တလျှောက်မိတ်ဆွေများနှင့်မိသားစုကန့်သတ်ရန်မှဝယ်စည်းရုံးသိမ်းသွင်းဖို့ကြိုးစားပါ, အထက်အကြောင်းပြချက်များအတွက်, ထို့ကြောင့်လှေကို၏စစ်မှန်သော "ကျယ်ဝန်သော" နာကျင်စွာသိသာမဟုတ်ပါဘူး.
9. စက္ကူ Chase ကို: အားလုံးခေါင်းစဉ်ကို Have, မှတ်ပုံတင်ရေး, တိုးချဲ့အာမခံနှင့်, ရရှိနိုင်သောလျှင်, တစ်စာအုပ်ချုပ်သမားအတွက်လက်ပေါ်ဝန်ဆောင်မှုမှတ်တမ်းများ. ဒါဟာအထင်ကြီးရဲ့, အဲဒါကိုဝယ်သောသူ၏ကနဦးတုံ့ပြန်မှုဟို-hum ပုံရသည်လျှင်ပင်.
10. အတိုငျးဖြစ်: ပထမဦးဆုံးဝယ်ယူသူတွေ့ဆုံကြိုတင်မဲအတွက်ကောင်းစွာသင်၏ Bottom-line ကိုစျေးနှုန်းထွက်ပုံ. ကြော်ငြာဒေါ်လာစျေးကုန်ကျစရိတ်များကိုသုံးသပ်ကြည့်ပါ, သိုလှောင်မှုနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအချိန်ကိုကုန်ကျစရိတ်လှေဖေါ်ပြခြင်းတွင်ပါဝင်ပတ်သက်ကြောင်းအဖြစ်ကောင်းစွာရောင်းရန်င်စဉ်.
ထုတ်ယူသွားမည်: သုံးပိုမိုသိကောင်းစရာများ ...
11. မကျန်ကြွင်းမကျန်ကြွင်း-: လှေကိုမမြင်ရပြီသူတစ်ဦးမှဖုန်းကိုကျော်သင့်အတွက်အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းထုတ်ဖေါ်မ. တစ်ဦးဝယ်သင့်ရဲ့လှေကိုကိုမြင်ခြင်းမပြုမီ, သူသည်နောက်စိတ်ခံစားမှုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတယ်င့်. မှတပါး, သငျသညျသူကိုတောင်တတ်နိုင်ဘယ်လောက်သိသလဲ? Plus အား, ခြံစည်းရိုးပေါ်ဝယ်လက်မကြာခဏမိတ်ဆွေများသင်တက် trip အနေနဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မှုမှာ "သစ်ကိုအလားအလာ" အဖြစ်မခေါ်ကြပါပြီ.
12. Paid Get: cash ရှင်ဘုရင်ဖြစ်၏. စစ်ဆေးမှုများအကြီးအ-တစ်ချိန်ကဖြစ်ကြောင်းသူတို့ရှင်းလင်းရန်. ဒီတော့-ခေါ် "ဘဏ်ကိုစစျဆေး" ရွှေကဲ့သို့ကောင်းသောမဟုတ်. ဤသူအပေါင်းတို့သည်မဝယ်ပြဿနာများ၏ရက်စွဲအပေါ်အကောင့်ကိုရက်နေ့တွင်စစ်ဆေးမှုများငွေပမာဏရှိပါတယ် "သက်သေခံ" ဖြစ်ပါတယ်. သူတို့ဟာအဖြစ်အလွယ်တကူပုဂ္ဂိုလ်ရေးစစ်ဆေးမှုများပယ်ဖျက်အဖြစ်ကိုဖျက်သိမ်းနိုင်ပါတယ်. သင်ဝယ်မယ့်ပိုက်ဆံဖြုန်းနိုင်ပါမသိမှီတိုင်အောင်လှေကိုကျော်လက်မှတ်ထိုးမနေပါနဲ့.
13. big မေးခွန်း: သငျသညျရောင်းချပေးနေပါသည်ဘာကြောင့်ဝယ်လက်လျော့ပါးသွားမည်ဖြစ်သလိုမေးဖို့. ကောင်းစွာ, ပိုက်ဆံအဘို့အမိုက်. သို့သော်သင်သည်မပြောနိုင်သေးပါဘူး (တစ်ခုသို့မဟုတ်အာမခံ၏အကျိုးအတွက်မပါဘဲ Tinker သင်တို့၏ငြီးငွေ့ကြောင်း). လူနေမှုပုံစံစတဲ့အပြောင်းအလဲတွေကိုအကောင်းဆုံးအဖြေကိုဖြစ်ကြသည်. သငျသညျဒီလိုမြင်ကွင်းကွိုးစားချင်တယ်ပြောပါနှင့်ပွင့်လင်းလှေထဲမှာမပွုနိုငျ, သင်တစ်ဦးစကိတ်လှေကိုမလိုအပ်ပါဘူးဒါကြောင့်သင့်ရဲ့လေးတွေတော့ဘူးသင်တို့နှင့်အတူရှိလိုက်မသွားဘူး, တစ် downsize နိုင်ရန်အတွက်ဖြစ်ပါသည်ဒါကြောင့်သင်တော့ဘူးကမ်းလွန်ငါးမျှားပါဘူး, ဘာဖြစ်ဖြစ်.